Nutrition – Healthy Life Journal
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— အသား၊ ငါးတွေ မစားတဲ့ သက်သတ်လွတ်စားသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပေမယ့် လူတိုင်းလိုက်နာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာစားသောက်မယ်ဆိုရင် အာဟာရပြည့်ဝပြီး စွမ်းအင်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ • ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်နဲ့ မုန်ညင်းစိမ်း စတဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင်အရွက်တွေကို တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အစားအသောက်စားရာမှာ တချို့လူတွေ သိလိုကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်သင့်အစာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင် ပြုပြင်စားနိုင်သလား ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချင်ရင် အဆင်သင့်အစာတွေကိုရှောင်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်သင့်အစာတွေကို ကြိုက်သူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– (၁) ကြက်ဥနှင့် ဥအမျိုးမျိုး ကြက်ဥမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ် ကိုလင်းနဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေက ကလေးငယ်တွေရဲ့  အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ တစ်နေ့ဘယ်လောက်ကျွေးသင့်သလဲ ကြက်ဥကို တစ်ရက်မှာ နှစ်လုံးကျွေးသင့်ပါတယ်။ (၂) နွားနို့နှင့်...
———၊ ဇွန် ၊——— ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေစဉ်အတွင်း အစားအသောက်တွေကို အာဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ရရှိအောင် စားသောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလို အာဟာရအပြည့်ရရှိအောင် မှီဝဲတာကြောင့် ဆေးကုသမှုကို အောင်မြင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးတွေမ၀င်အောင် တွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိစေပါတယ်။ အာဟာရချို့ တဲ့မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးရရှိမှုကို...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– ကလေးတွေက ဒီအချိန်မှာဆိုရင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျနေရင် ရောဂါပိုးတွေ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်နေဖို့ ဥပမာ-ဗီတာမင် စီများတဲ့ အစားအသောက်၊ ဇင့်များတဲ့ အစားအသောက်တို့က အခုချက်ချင်းစားရင် အခုချက်ချင်းမမြင့်ပါဘူး။...
ခံစားနေရသည့် မျက်စိဝေဒနာများ • မက်ကူလာယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း • ဆီးချိုရောဂါကြောင့် မျက်စိအာရုံခံလွှာ ထိခိုက်ခြင်း လိုအပ်သည့် ဓာတ်များ ဗီတာမင်များ မရှိမဖြစ် ဖက်တီးအက်စစ် အမိုင်နိုအက်စစ် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များ (၁) ဘိုင်အိုဖလေဗနွိုက် (၂) ကာရိုတီးနွိုက် (၃) အက်စ်တာဇန်သင်း၊ လူတင်၊...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အဓိကအနေနဲ့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ ကိုယ်ဝန်သုံးလရှိနေပါပြီ။ A. ကိုယ်ဝန်စဆောင်တဲ့အချိန် သုံးလအတွင်းမှာတော့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေ လုပ်ရပါမယ်။ ရှောင်သင့်တာတွေရှောင်ပြီး၊ စားသင့်တာတွေလည်း အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားရပါမယ်။ (၁)...
သင့်မှာ အာဟာရချို့တဲ့မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်
———၊ လရိပ်မေ ၊——— သင့်မှာ အာဟာရချို့တဲ့မှုရှိ၊ မရှိ အောက်ပါတို့ကိုကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ လျှာက ပြောင်းလဲနေပါသလား လျှာဖြူနေပြီး ကွဲနေတာက သံဓာတ်ချို့တဲ့တာကြောင့်ပါ။ လျှာကွဲပြီး နာကျင်တာက ဗီတာမင် B3 ချို့တဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကွဲနေတာက B12 ချို့တဲ့တာကြောင့်ပါ။...